Radio Don Bosco - Tsy tanjona ny voadin-drelijiozy fa fiainana sy firosoanana
Isan-taona, ny Salezianina rehetra an-dalam-piofanana dia manavao voady, andro mialohan'ny voady voalohany izay ataon'ireo Novisy no fanatanterahana izany. Marihina fa efa lovam-panahy ho an'ny Salezianina eto Madagasikara ireo fotoana voatondro ireo. Anisan'ny nanamarika ny harivan'ny 7 septambra àry ny fanavaozana voady izay nataon'ireo Frera miisa 15, ka ny enina tamin'izy ireo no nanavao mandritra ny roa taona raha toa ka iray taona ny sisa. Fa teo ihany koa no nadraisana an'ireo Novisy vaovao miisa 18 izay hisolo toerana azy 22 mirahalahy, nanamarika an'izany ny fandraisan'izy ireo ny Baiboly Masina, izay angady ho entiny miasa mandritra ny Novisia. Ary nofaranana tamin'ny fitsofan-drano an'ireto Novisy vao hanao voady ny fotoana, tso-drano izay nataon'ireo ray aman-dreny niteraka azy ireo.
Ny marainan'ny 8 septambra, tamin'ny 8 ora sy sasany no nanomboka ny Eokaristia Masina izay notarihin'ny Prôvinsialy. Nisongadina nandritra ny toriteny ny famoaboasany ny teny fanevan'ireto mpanao voady. Nambarany fa ny maha kristianina dia mitaky adidy sy andraikitra, tsy eo anivon'ny Fiangonana ihany fa misandrahaka eo anivon'izao tontolo izao. Ary amin'ny maha mpianatr'i Kristy antsika dia adidintsika vita batemy ny mitory ny Vaovao Mahafaly mba hamoa be ny voa nafafy ka ho tonga mpianatra mahatoky tokoa isika. Nitodika tamin'ireto hanao voady ny lehibem-pikambanana, fa tsy tanjona ny voady fa fiainana sy firosoanana lalindalina kokoa amin'ny fanarahan-dia an'i Kristy.
Namaranana ny Sorona Masina ny fifandimbiasam-pitenenana nataon'ireo solontenan'ny vao avy nanao voady, ny solontenan'ny ray aman-dreny niteraka ary ny Lehibem-pikambanana, fa raha atao bango tokana dia faly ny rehetra ; ny fiarahabana, ny firarian-tsoa ary ny fisaorana no nipololoatra avy tao am-pon'ny rehetra.
Raha asian-teny kely ny mikasika an'ireto vao avy nahavita voady dia tsy maintsy mihazo an'i Fianarantsoa izy ireo, hanohy ny dingam-piofanana manaraka izay toeram-piofanana anaovana ny filozofia ka maharitra telo taona izany. Mbola lavitra ny lalana tsy maintsy haleha ka ny mitondra am-bavaka azy ireo no atao.